08/20/13 ~ Myanmar Forward
သမ္မတပုံ ဂရပ်ဖတီဆွဲသဖြင့် တရားစွဲခံရသူကို ဆီးဂိမ်းအတွက် နေပြည်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ထား
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
သမ္မတပုံတူကို ဂရပ်ဖတီဆွဲသဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည့် ကိုအာကာကျော် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပုံတူကို ဂရပ်ဖတီ နံရံပန်းချီ ရေးဆွဲခဲ့သဖြင့် တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရသူ ကိုအာကာကျော်အား ယခုလာမည့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းအတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်း နံရံရေးပန်းချီများ ရေးဆွဲပေးရန် တာဝန်ရှိသူများက ဖိတ်ခေါ် ထားကြောင်း သိရသည်။
“ဖိတ်တာကတော့ နေပြည်တော်က ဆီးဂိမ်းက တာဝန်ရှိသူတွေပဲ ဖိတ်တာပါ။ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး ကျနော့်ကိုပြောတာ။ အခုတခါကတော့ ဂရပ်ဖတီဆွဲတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ တရားဝင် ဆွဲရတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့” ဟု ကိုအာကာကျော်က ဆိုသည်။
၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် နံရံရေးပန်းချီများ ရေးဆွဲရန် ယခုလာမည့် စက်တင်ဘာလတွင် နေပြည်တော်သို့ သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ရုပ်ပုံ ရေးဆွဲရမည်ဆိုသည် ကိုတော့ မပြောလိုကြောင်း ကိုအာကာကျော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီတခါတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ပုံတူကို မဆွဲဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဘာပုံတွေ ဆွဲမယ် ဆိုတာကို ကြိုပြောလိုက်ရင် ပေါ့သွားမှာစိုးရိမ်လို့ မပြောသေးဘူး။ ပြိုင်ပွဲရောက်မှပဲ ဘာပုံတွေ ဆွဲမယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပါတော့” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
လာမည့် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် ဆီးဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆီးဂိမ်း လာဘ်ကောင်ဖြစ်သော ဇီးကွက်ရုပ် များမှ စ၍ အရုပ်များအားလုံး ရေးဆွဲမည် ဖြစ်သော်လည်း ရေးဆွဲမည့် ရုပ်ပုံအရေအတွက်ကို စဉ်းစားထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆီးဂိမ်း အတွက် နံရံရေး ပန်းချီများကို နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေဖြစ်သည့် မြို့မဈေးအနီးတွင် ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် ဆီးဂိမ်းအတွက် နံရံရေး ပန်းချီကို ကိုအာကာကျော် တဦးတည်းကိုသာ ရေးဆွဲပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း၊ နံရံရေး ပန်းချီ ရေးဆွဲနိုင်မည့် ဘုတ်ပြုလုပ်နေသည်မှာ မပြီးမြောက်သေးသည့် အတွက် စောင့်ဆိုင်း နေရကြောင်း၊ အဆိုပါဘုတ် ပြီးသည်နှင့် ကိုအာကာကျော်အား ခေါ်ယူကာ ရေးဆွဲခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ပြုလုပ်နေရသည့် တာဝန်ရှိသူတဦး ဖြစ်သူ ဦးဌေးအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အစကတော့ ဆီးဂိမ်းအတွက် ဂရပ်ဖတီ ဆွဲဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံကို အိုဘားမား လာတုန်းက ပုံတူဆွဲဖူးတဲ့ ကောင်လေး တယောက်ရှိတယ်၊ သူ့ကိုခေါ်ပြီး ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ ဆွဲဖို့အကူအညီတောင်းရင် ကောင်းမယ်၊ ဒါမှသာ လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စား လာနိုင်တယ်လို့ ဒီက တယောက်က ဝန်ကြီးကို အကြံပေးခဲ့တယ်။ ဝန်ကြီးက သဘောတူပြီး လက်ခံလို့ အခုလိုတွေ စီစဉ်ရတာပေါ့” ဟု ဦးဌေးအောင်က ရှင်းပြသည်။
လာမည့် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် နံရံရေး ပန်းချီ ရေးဆွဲခြင်းများ ထည့်သွင်းရန် နေပြည်တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီအား ခွင့်ပြုချက် တင်ထားခဲ့သော်လည်း စည်ပင်သာယာ၏ ခွင့်ပြုမိန့်မှာ မကျလာသေးဘဲ အချိန်ကြာနေခြင်း ကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ နောက်ကျရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စည်ပင်ရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်မရသေးလို့ ကြာနေတာ။ အခုမှ ခွင့်ပြုမိန့်ရလာလို့ ပုံဆွဲရမယ့် ဘုတ်ကိုလည်း အခုမှ လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘုတ်ကလည်း အခုထိ မပြီးသေးလို့ ပုံဆွဲပေးမယ့်သူကို မခေါ်ထားသေးဘူး။ ဘုတ်ကိုတော့ ဒီ ၁၀ ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားတယ်။ ဘုတ်ပြီးမှ အာကာကျော်ကို လာဖို့ ခေါ်မှာပါ” ဟု ဦးဌေးအောင်က ပြောသည်။
ယခုလာမည့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် နံရံရေးပန်းချီများတွင် ရေးဆွဲရမည့် ပုံများကို ကိုအာကာကျော် စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲခွင့် ပေးမည်မဟုတ်ဘဲ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီးက ခွင့်ပြု၍ ရေးဆွဲခိုင်းမည့် ပုံများကိုသာ ရေးဆွဲခွင့် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
“ဘာပုံတွေ ဆွဲရမယ်လို့တော့ ကျနော်တို့လည်း မသိသေးဘူး။ ဝန်ကြီးက စဉ်းစားတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကျတော့ ကျနော်တို့ အပါအဝင် ကိုအာကာကျော်လည်း စဉ်းစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဝန်ကြီးရွေးပေးတဲ့ ပုံကိုပဲ ဆွဲရမှာ။ ပုံတွေကတော့ ဆီးဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစတာတွေထဲက ပုံတွေပဲပေါ့” ဟု ဦးဌေးအောင်က ဆိုသည်။
ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ရန်ကုန်စည်ပင် နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ၊ အများပြည်သူ၏ မြင်ကွင်းများတွင် ဆေးခြယ်ခြင်း၊ စာလုံးများ ရေးသားခြင်း၊ ရုပ်ပုံများ ရေးဆွဲခြင်း ပြုလုပ်သည့် မည်သူမဆို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ယခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကိုအာကာကျော်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ နံရံတခုပေါ်တွင် သမ္မတ၏ ပုံတူ ဂရပ်ဖတီကို ရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်းကြောင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ တရားစွဲဆိုခံရကာ ဒဏ်ငွေ တသိန်း ပေးဆောင်ခဲ့ရသည်။
“ဂရပ်ဖတီ မဆွဲရဘူးလို့ ကန့်သတ်ပြီး ဥပဒေချထားတုန်းက ချထားခဲ့တယ်။ အခုကျတော့လည်း ဆွဲပေးပါလို့ လာကမ်းလှမ်းတဲ့ အပေါ်မှာ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ခံစားချက်တွေ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တရားစွဲခဲ့တာက ရန်ကုန်က လူတွေဖြစ်ပြီး အခု လာကမ်းလှမ်းတာက နေပြည်တော်ကလူတွေ ဖြစ်လို့ ဘာ တခြား ခံစားချက်မှ မထားထားဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာ လည်း သိပ်မရှိဘူး” ဟု ကိုအာကာကျော်က ဆိုသည်။
မိုးညှင်းမြို့ ဖုန်းဆော့ဝဲလ်တစ်ခု ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အကြောင်းအရာများ ဖော်ပြရန် မြို့သူမြို့သားများမျှော်လင့်
မိုးညှင်း၊ သြဂုတ် ၁၉။
မိုးညှင်းမြို့တွင် မိုးညှင်းမြို့ရှိ အကြောင်းအရာများ သီးသန့် ဖော်ပြပေးလျက်ရှိသော ဖုန်းဆော့ဝဲလ်တစ်ခု ပြန့်နှံ့လျက်ရှိပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အကြောင်းအရာများ၊ သတင်းများ ကိုဖော်ပြ၍ ရန်မြို့သူမြို့သားများက မျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဖုန်းထဲမှာ မိုးညှင်းသတင်းဆိုပြီးသီးသန့် ဆော့ဝဲလ်ထည့်ပြီး ကြည့်လို့ရနေတဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခုရှိနေတယ်။ ဘယ်သူလုပ်ထားတယ်တော့ မသိကြပါဘူး။ မိုးညှင်းသတင်းတွေသီးသန့်ပါ။ အင်တာနက်ဆော့ဝဲလ် ဖန်တီးသူကို ကျေးဇူးတင်ပေမဲ့ ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အကြောင်းအရာက ရှက်စရာ၊ သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ သတင်းမဟုတ်ဘဲ အတင်းတွေဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျောင်းသူမလေးတွေ အိပ်နေတဲ့ပုံတွေနဲ့ အတင်းပြောတဲ့ အကြောင်းတွေ တင်ပေးထား တာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်သူမလေးတွေ သူ့အခန်းထဲမှာ သူအ်ိပ်ချင်သလို အိပ်ပါစေ။ ဒါရေးတင်စရာလား။ မြန်မာ့ရိုးရာ စည်းးကမ်းပျက်ပြီး အိပ်ချင်သလို အိပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားထားပြီး မြန်မာအချင်းချင်း၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းတဲ့စိတ် မွေးသင့်ပါတယ်။ အဖျင်းတွေပြောပြီး ယုတ်မာအပြစ်တင်ဖို့ဘဲ ကြည့်မနေသင့်ပါဘူး။ မိမိမြို့မိမိတိုင်းပြည်ဟာ သူတပါး တိုင်းပြည်ထက်သာအောင် ငါတို့ဘာလုပ်ရကြရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်တွေကို တင်ပြကြစေချင်တယ်”ဟု ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက ၎င်း၏ အမြင်များကို ပြောသည်။
လူနှစ်ယောက်ရှိလျှင် သုံးဖွဲ့ ကွဲတတ်သောအကျင့်၊ အတင်းအဖျင်းပုတ်ခတ်တတ်သော အကျင့်များကို ဖျောက်ပြီး ခံယူချက်မတူသော အရာများကို ဘေးဖယ်၍ ခံယူချက်တူသော အချက်များကို ပေါင်းစည်းကာ အများအကျိုးရှိသော အချက်များကို ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးနိုင်လျှင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းသတင်းဝက်ဆိုက်က တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ချင်ပြည်နယ်ဆိုတာ အလယ်ပ်ိုင်း၊ အောက်ပိုင်း တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် မတူညီသော အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိကြောင်း၊ မိုးညှင်းသားများသည် ယင်းကဲ့သို့ အောက်တန်းကျသော လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ဘူဟုသာ ယုံကြည်ထားကြကြောင်း ယင်းဖုန်းဆော့ဝဲလ်နှင့် ပတ်သက်၍ မိုးညှင်းမြို့မှ လေးစားရသူ သက်ကြီးပိုင်းများက ပြောကြသည်။
From: Myanma Age
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under မုဒိမ်းမှု | No comments
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ကင်တားနားကို လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ် လုံးဝ ( လုံးဝ) မရှိဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်ပြောကြား
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under သတင်းတို | No comments
From : .. ye htut
အမတ်များ မေးခွန်း အတိုချုပ်မေးရန် ဦးရွှေမန်းသတိပေး
လွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ၌ အမတ်များအနေဖြင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြ ထား သည့် မေးခွန်း အတိုချုပ်သာ မေးမြန်းရန် သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဦးရွှေမန်းက အမတ် များထံ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး သတိပေးလိုက်သည်။
ခုနစ်ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်သည့် ယခု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းက မေးခွန်းနိဂုံးချုပ်ရန် နှုတ်ဖြင့် မကြာခဏ သတိပေးခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ စာဖြင့် ထပ်မံသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သတိပေးရခြင်းမှာ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ လျင်မြန်သွက်လက်စေရေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးရွှေမန်း၏ သတိပေးစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၁(င)တွင်လည်း မလိုအပ်ဘဲ ရှည်လျားခြင်းမရှိသော မေးခွန်းများကိုသာ လွှတ်တော်တွင်မေးရန် ပြဌာန်းထားသည်ဟု သတိပေးအကြောင်းကြားစာတွင် ထည့်သွင်း ကိုးကားထားသည်။
အီဂျစ် ထောင်ဖောက်ရန် ကြိုးစားမှုတွင် အစ္စလာမ္မစ် အကျဉ်းသား ၃၆ ဦး သေဆုံး
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အီဂျစ်တွင် အကျဉ်းထောင် တစ်ခု၌ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ သြဂုတ် ၁၈ ရက်က ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေး ကြရန် ကြိုးစားမှု တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရာ အကျဉ်းသား ၃၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း AFP သတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ယင်းကိစ္စရပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတ မော်စီကို ထောက်ခံ ဆန္ဒပြနေသည့် အစ္စလာမ္မစ် အင်အားစုများ အား အစိုးရက အကြမ်းနည်းဖြင့် နှိမ်နင်းနေသည့် ငါးရက်အတွင်း သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၈၀၀ နီးပါး ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
“ထောင်သားတွေ မလွတ်သွားအောင် မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ တားဆီးနေတဲ့ အချိန်မှာ အကျဉ်းသား ၃၆ ဦးဟာ လူ ပိမိတာနဲ့ အသက်ရှူကျပ် တာတွေကြောင့် သေဆုံးသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မွတ်ဆလင် ညီနောင်များ အင်အားစုက ယင်းမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ ယင်းထုတ်ပြန်ချက် တွင် “အာဏာသိမ်းပွဲကို မထောက်ခံတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ အကြမ်းဖက်တာကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံ ၃၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဟာ သူတို့ ပစ်မှတ်ထားသူတွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်ဖြတ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပါဝင်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း အသိပေး အမိန့်ကြေညာစာ တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကာ ယင်းစာတမ်းတွင် ပြည်သူများ အနေနှင့် ညမထွက်ရ အမိန့်ကို လေးစား လိုက်နာကြစေလိုကြောင်း သတိပေးထားသည်။
ရဲနှစ်ဦးလည်း ဆူးအက် တူးမြောင်းအနီး မြို့တော် အစ္စေမေးလီယာတွင် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည် ဟု ဝန်ကြီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန် ထားသေးသည်။
ဆန္ဒပြ လူအုပ်များကို သွေးမြေကျ ဖြိုခွင်းမှုများအတွက် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်တကြီး ဝေဖန်ရှုတ်ချမှု များ ပြုလုပ်ကြပြီး အလွန် ဆိုးဝါးသော အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် ထိုးနှက်ချက်များဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဥရောပ သမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ မူဝါဒ အကြီးအကဲ ကက်သရင်း အက်ရ်ှတန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း တို့ကလည်း အင်အားသုံးပြီး ဖြိုခွင်းခြင်းကို ဝေဖန် ပြစ်တင်ထားသည်။
နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများ ဖြစ်လျက် ရှိနေသည့် မွတ်ဆလင် ညီနောင် များ အင်အားစုကို ဖျက်သိမ်းလျှင် အီဂျစ်အတွက် ကောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အီဂျစ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဇမ်အယ်ဘီဘလာဝီက အကြံပြုထားသည်ဟု အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိက သတင်း မီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့ သည်။
အီဂျစ် သမ္မတ မိုဟာမက်မော်စီကို စစ်တပ်က ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းအား ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများကို အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးနောက် ဝန်ကြီးချုပ်၏ ထိုသို့ လက်ရှိ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစု မွတ်ဆလင် ညီနောင်များကို ဖျက်သိမ်းရန် အကြောင်းကြားမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမရုပ်ထု စိုက်ထူရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကမကထပြုလုပ်ပေးသော မြောက်ဦး RNDP မှ ဥက္ကဌ ဦးဦးထွန်းလှိုင်က “ ရည်ရွယ်ချက်က တော့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့ ရခိုင်အာဇာနည်တွေကို အားလုံးက သိရှိလေးစားလိုက်နာပြီး နမူနာအဖြစ် စံတင်ထားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အသျှင်ဦးဥတ္တမကိုရုပ်ထုကို စိုက်ထူရတာဖြစ်ပါတယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
“ ဆရာတော်ကို ကြေးဆင်းထုနဲ့ တကိုယ်လုံးသွင်းလုပ်မယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ရုပ်ထုတင်ထားမယ့်ဟာကို အောက်က ကျောက်ခုံနဲ့လုပ်မယ်။ အထက်မှာတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ဆွမ်းခံသပိတ်နဲ့ ရပ်နေတဲ့ပုံပေါ့။ ကျောက်ခုံကိုတော့ အောက်ခြေနားက ၄ ပေပတ်လည်နဲ့ အထက်နားမှာတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ခြေချတဲ့နေရာပေါ့လေ အဲဒါကတော့ ၃ ပေ ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ အရပ်ကိုတော့ ၆ ပေသတ်မှတ် ထားပါတယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမရုပ်ထုအား တင်ထားမည့် အောက်ခံကျောက်ခုံ၌ အရှေ့မျက်နှာတွင် ဆရာတော်၏ အတ္ထုပ္ပတိ၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ဆရာတော်၏ ရင်းတွင်းစကားဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည့် “ထွက်သွား - Get Out! ” ဆိုသည့်စကားနှင့် နောက်မျက်နှာတွင် အလှူရှင်များစာရင်းကို ရေးသားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ရုပ်ထုကိုသွင်းလုပ်မည့် ပန်းပုဆရာ ဦးကျော်သာညွှန့်က ပြောသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ….. အလုပ်အကိုင် မကောင်းလို့ လောပန်းဖြစ်မလားဆိုပြီး ကချင်ပြည်နယ်သွား ကျောက်ကောက်မယ်… ရွှေကျင်မယ်…. စိတ်ကူးထားပါသလား ….. ငါတို့ နိုင်ငံရဲ့ တွင်းထွက်ရတနာတွေ ပေါများရာ အဲဒီကချင်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်လုပ်မဲ့သူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ သယံဇာတတွေကို အစိုးရက ဒါမှမဟုတ် ကေအိုင်အေက စနစ်တကျထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့ အစီအစဉ်ချ ထိန်းချုပ်တာတော့မဟုတ်ပါ။ အဓိက အလုပ်သမား ပြဿနာ တက်နေကြတာပါ။ အရင်တုန်းက နိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားကလူတွေ လာပြီး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အဲဒီ့နေရာမှာ အခု ကေအိုင်အေ ကို ဆက်ကြေးပေးပြီးလုပ်လည်း ကေအိုင်အေ လူသစ်စုတာ ခံရတယ်တဲ့။
အမှန်ကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆိုတာ ကိုယ့်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့ပြီး ဒေသ အတွက် ရပ်တည်ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကေအိုင်အေတွေက သူတို့လူမျိုးတွေတောင် ကချင်စစ်သား မလုပ်ချင်ကြတော့ လူမျိုးအချင်းချင်း အဓမ္မဖမ်းဆီး လူသစ်စုတာကနေ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကဒူး ကနန်း၊ ရ၀မ်၊ လီဆူး၊ ဂေါ်ရခါး ………. အို အကုန်စုံအောင် တွေ့တဲ့လူကို ဖမ်းပြီးစုနေတယ်။ အရင်တုန်းက ကချင်ထဲမှာတောင် တစ်ခြားသူတွေကို မယုံလို့ ဂျိမ်းဖောကိုပဲ စုတာလေ… အခုတော့ အခြားသူတွေကို ယုံလို့တော့ မဟုတ်ဘူး…။ အဲလို လူမျိုးတွေပါတော့ ဒေသအလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေတောင်းလို့ ကောင်းအောင်လို့တဲ့ ….. လူမျိုးကွဲကို မယုံကြည်လို့ …. တစ်ချို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို သေနတ် တောင် ပေးမကိုင်ဘဲ ကချင်ဓားပဲ ပေးကိုင်တယ်တဲ့ (တောခုတ်ဖို့)..သေနတ်ပေးကိုင်တာနဲ့ သူတို့တွေကို ပြန်ပစ်မှာကြောက်တော့ ကင်းစောင့်တာတောင် သေနတ်မကိုင်ရဘူးတဲ့…..။ နောက်တစ်နည်းက တွေ့တဲ့ လူဖမ်း၊ လူသစ်စု၊ ငွေနဲ့ပြန်ရွေးမှ လွှတ်ပေးတဲ့ (ဒါမှပဲ ထမင်းစားရတော့မှာ)။
သူတို့လူကြီးတွေက မူးယစ်ဆေး၊ ကျောက်စိမ်းနဲ့ အဆင်ပြေ ချမ်းသာပြီး အာဏာနဲ့ ယစ်မူးလို့ နေပေမယ့် အောက်ကအဖွဲ့တွေက အစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ ၂ နှစ်လောက် ဆုံးမတာခံရတော့ လစာလည်းမရ ကြုံရာရှာစားတဲ့ ဘ၀နဲ့သေသူသေ…အဖွဲ့လိုက် ပြေးသူပြေး…. ဆိုတော့ လူလိုနေတာလည်း ပါ ပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ ကူညီချင်လို့ ဆန္ဒရှိရင် မွတ်စလင်ပါ လက်ခံနေပြီလို့သိရပါတယ်..။ စဉ်းစားဖို့ ကတော့ ….. ပင်ပန်းမယ် … ကြမ်းတမ်းမယ်…. အဆိုးဆုံးဒုက္ခနဲ့ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် သောကတွေ ခံစားရပြီး အပြန်လမ်းအတွက်တော့ မရှိသေးဘူးတဲ့။ လက်နက်ပြ အနိုင်ကျင့် …. ခြိမ်းခြောက်… လူသတ်.. အဓမ္မပြုကျင့်… စတဲ့ ဥပဒေမဲ့တွေ လုပ်နေတာကို တားဆီးပြောဆိုမယ့် လူတော့ အခုမရှိသေးဘူး..။ နောင်တစ်ချိန်တော့ အဲဒီပြစ်မှုတွေအတွက် ကြိုးကွင်း မလုံလောက်လို့ ငါတို့အညာမှာသုံးတဲ့ နဖားကြိုး များစွာ အော်ဒါမှာရမယ်လို့ ရှေ့နေတစ်ဦးကတော့ ပြောဖူး​ကြောင်း…။
ယခုတစ်ပတ်အတွက် ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဟန်းဆက်ဈေးနှုန်းများ (20.8.2013)
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ယခုတစ်ပတ် 20.8.2013 မှ 27.8.2013 အတွင်း ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းဈေးနှုန်းများ ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
S IV mini –404000
S III mini –246000
S4 Zoom –472000
Mega(5.8 ) –328000
S II plus –298000
Z ultra –596000
Tipo dual –162000
One X plus –447000
Wildfire S –158000
Optimus G –460000
Nexus4–422000
Ipad&Iphone Price List
I phone5(16GB) –650000
I phone5(32GB) –749000
I phone5(64GB) –840000
Ipad4 wifi(16GB) –479000
Ipad4 wifi(32GB) –551000
Ipad4 wifi(128GB) –735000
Ipad4 4G(16GB) –597000
Ipad4 4G(128GB) –838000
Ipad mini wifi(32GB)–424000
Ipad mini wifi(64GB)–515000
Ipad mini 4G(16GB) –461000
Ipad mini 4G(32GB) –546000
Ipad mini 4G(64GB) –646000
Ipod Touch(32GB) –295000
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under သတင်းများ | No comments
ညဘက်မှာ အန္တရာယ်များလို့ မနက်ဖွင့်တဲ့ ဒေးကလပ်က ရန်ကုန် လူငယ်တွေအကြား ခေတ်စားနေ
တာမွေမြို့နယ်ထဲက Day Club ဒေးကလပ်တခု ထဲက မှုန်ပျပျ မီးရောင်တွေအောက်မှာ လူငယ်တွေဟာ ဒီဂျေလ် ဘားက ဖွင့်လိုက်တဲ့ မြူးကြွကြွ သီချင်းသံတွေအကြား ဘီယာခွက်၊ ဝိုင်ခွက် တွေကိုင်လို့ အတွဲ ကိုယ် စီ၊ အဖွဲ့ ကိုယ်စီ နဲ့ စည်းချက်လိုက် ကခုန်နေကြပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်မြူးနေကြတယ်။
Day Club ဆိုတဲ့အတိုင်း လာရောက်ကြတဲ့သူ အများစုကတော့ အခြေခံပညာကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ဆဲ လို့ ယူဆ ရတဲ့ လူငယ်ပိုင်းတွေများပါတယ်။ ညဘက်ပိုင်း အိမ်ကနေ အပြင်ထွက်ဖို့ ခက်တာ၊ ကျောင်းချိန်မှာ အတန်းမတက်ဘဲ အပြင်သွားချင်တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုရုံး ပျော်ပါးချင်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ကျောင်းသားလူငယ်အများစုက Day Club ကို လာတတ်ကြပါတယ်။
တချို့ကလည်း ကလပ်ထဲမှာ ဝတ်ဖို့ အဝတ်အစား သပ်သပ် ယူလာပါတယ်။ ကလပ်ထဲမှာရှိတဲ့ အိမ်သာထဲမှာ ဝင်ပြီး လဲဝတ်ကြတ၊ အလှပြင်နေကြတာတွေ ပါတယ်။ အုပ်စုဖွဲ့လာကြတာ များတော့ ကောင်တာမှာ ဘီယာဝယ်ပြီး နေရာရှာထိုင်ကြတဲ့ သူတွေကို တွေ့ရသလို အသက်ငယ်ငယ် အပျော်မယ်လေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် သားကောင် လာရှာနေကြပါတယ်။
တချို့ကလည်း အပျော်မယ်လေးတွေနဲ့ ဈေးညှိပြီး အဆင်ပြေသွားကြတာတွေကြောင့် ကလပ်ထဲကနေ ခါးချင်းဖက် ထွက် သွားကြသလို တချို့ကလည်း မစားရဝခမန်း ပါးစပ်အရသာခံ စနောက်နေကြတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
လူငယ်အချင်းချင်း ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဘီယာသောက်ကြ၊ ဒီဂျေလ်တီးလုံး နောက်မှာ လိုက်ပြီး ကခုန်လိုက်ကြ၊ အတွဲရှိသူတွေကလည်း သူတို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာရှာပြီး အဆင်ပြေသလို နေထိုင်ကြတာတွေကို မြင်ရတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ကား တကားကို ကြည့်နေရသလိုပါ။
“ ညဘက် အပြင်ထွက်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးလေ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေထဲက ပါတီတခုခုလုပ်မယ်လို့ သိရင်ကလပ်ကို လာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က သဘောကျလို့လားတော့ မသိဘူး၊ ကလပ်တက်ရတာ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အပျော်မယ်တွေ၊ မိန်းမလျာ တွေများတဲ့ ကလပ်တွေကိုတော့ သိပ်မသွားဖြစ်ဘူး”ဟု အသက် ၂၀အရွယ်ရှိတဲ့ မယမင်းခင်က သူ့ အမြင်ကို ပြောပြပါတယ်။
မယမင်းခင်က ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ညဘက်အိမ်က ထွက်ဖို့ အဆင်မပြေတာတွေကြောင့် နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ကလပ်တွေကို ပါတီရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏ သွားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ဦးစီးလုပ်တဲ့ ပါတီတွေက ဒေးကလပ်မှာ များတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒေးကလပ်အများစုဟာ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲ ကလပ်ဝင်ကြေး တဦးကို ၄၀၀၀ ကျပ် ကနေ ၅၀၀၀ ကျပ်ထိ ကောက်ခံပြီး မနက် ၁၀နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီ အထိ နေ့စဉ် ဖွင့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်မှတ် ဝယ်ယူမှုများတဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းပေးတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက သက်ဆိုင်ရာရဲ့ ရှောင်တခင် စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့် ဒေးကလပ် အပါအဝင် နိုက်ကလပ် ၊ အနှိပ်ခန်းတွေနဲ့ ကာရာအိုကေ အခန်းအများစု ငုတ်ရှိုးသွားပေမယ့် ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ ပြန်ပြီး ခေတ်စားလာပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲမှူးဦးတင်ဝင်းကတော့ ဒေးကလပ်တွေကေ ကျာင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် လုံးဝ ဖွင့်ခွင့် မပြုထားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းရတာနဲ့ တပြိုင်နက် တည်ဆဲဥပဒေတွေ နဲ့အညီ ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်မှာပါလို့ ဧရာဝတီကို ရှင်းပြပါတယ်။
ကလပ်အများစုကလည်း တရားဝင်ဖွင့်ခွင့် မပေးထားပေမယ့် လူသိရှင်ကြားပဲ သူတို့ရဲ့ ကလပ်မှာ ပါဝင်မယ့် နာမည်ကြီး ဒီဂျေအများစုရဲ့ နာမည်တွေ၊ ကလပ်ကို ပါတီကို စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်တဲ့ ပွဲအစီအစဉ်တွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ကြော်ငြာ လက်ကမ်း စာစောင်တွေကို လူစည်ကားရာနေရာ အများစုမှာ လိုက်လံဝေငှကြတာ၊ အင်တာနက်
စာမျက်နှာတွေထက်မှာ ကြော်ငြာတာမျိုးတွေနဲ့ လူငယ်အများစု လာချင်အောင် ဆွဲဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြိုင် ကလပ်တခုထက် တခု ပိုပြီးတော့
လူအများဆုံး ဝင်အောင်၊ ပါတီလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း လူအလာများအောင်ဆိုပြီး စုံတွဲတွေအတွက် Kissing Time (နမ်းရှုံ့သည့်အစီအစဉ်) ကို ပြိုင်ပွဲသဘောမျိုးထည့်ပြီး စုံတွဲဆုပေးတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
တလခြား တခါလောက် ပုံမှန် ဒေးကလပ် တက်လေ့ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးမြတ်ဟိန်း ကတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ညဘက် ကလပ်တက်ရတာ အ န္တရာယ်များတာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ပျော်ပါးနိုင်အောင် ဒေးကလပ်တက်ဖြစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ တခါတလေ ကျောင်းစာတွေနဲ့ လုံးပန်းရလို့ ပင်ပန်းလာတဲ့ အခါ ကလပ်ထဲမှာ အော်ဟစ် ကခုန်လိုက်တာက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပျောက်သွားစေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိဘတွေဘက်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ “ ဒေးကလပ် လုပ်တယ်ဆိုတာက ကျောင်းသားကျောင်းသူအရွယ်ကလေးတွေကို အဓိက ဆွဲဆောင်ချင်တဲ့ သဘောပဲ။ မိဘတွေက သားသမီး တွေကို ပညာတတ်စေချင်လို့ ကျောင်းကို ပို့ထားပေမယ့် ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လို့ အဖော်ကောင်းပြီး ကလပ် ရောက်သွားမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်တယ် ”လို့
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတဦး မိခင် ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
ကလပ်တွေကို တရားဝင်ဖွင့်ခွင့် မပေးထားပေမယ့် ဖွင့်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန်ထားတာ မရှိတာကြောင့် ပွဲစီစဉ်သူတွေအနေနဲ့ အဆင်ပြေသလို လုပ်နေကြတယ်လို့လည်း ရန်ကုန် အင်တာနေရှင်နယ် ဟိုတယ်အတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Pioneer ကလပ်ရဲ့ ဒီဂျေတဦးဖြစ်သူ ကိုလင်းလင်းက ပြောပြပါတယ်။။
“ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အများစု လာကြတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေးပါတီ လုပ်တယ်ဆိုတာက ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုကြီးကို လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်တာပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း သားသမီးကို ပျက်စီးစေချင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် လူဆိုတာက အသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လုပ်နိုင်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင် အန္တရာယ် မရှိပါဘူး”လို့ ဒီဂျေ ကိုလင်းလင်းက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒေးကလပ် ပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ အသက်အရွယ် ပိုင်းခြားပြီး ဝင်ခွင့်ပေးတာမျိုး၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက်အောက်အရွယ်ဆို ပေးမဝင်တာမျိုး စသည်ဖြင့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်သင့်သလို ကလပ် ဆိုတာက ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာ တန်းဝင်တဲ့ စနစ်မျိုးနဲ့ ခွင့်ပြုသင့်တယ် လို့
“ အသက်အရွယ်ရောက်ပြီး အပန်းဖြေချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကော ဒေးကလပ် မရှိသင့်ဘူးလား ဆိုတာတော့ ကျနော်မပြောတတ်ပါဘူး။ မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်း သားသမီး အပေါ် နားလည်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြထားမယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးခင်က နာမည်ကြီး သတင်းစာ က ရန်ကုန်မှာ ဒေးကလပ်တွေ ခေတ်ပြန်ထနေတဲ့ အကြောင်း သတင်းရေးပါတယ်။ နောက် The Voice ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာပေးစာ ကဏ္ဏမှာလည်း မိဘတဦးက သူရဲ့ သမီး ဒေးကလပ် သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို စုံစမ်းရာကနေ ကလပ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေ အများဆုံးလာရောက်ကြပြီး နေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ တာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ DJ Club၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိ Cloud 9၊ ရန်ကုန် အင်တာနေရှယ်နယ် ဟိုတယ်အတွင်းက Pioneer၊ ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်က Sky World၊ စီးတီးစင်တာရှိ ကလပ်၊ ကုက္ကိုင်းမြို့နယ်တွင်းရှိ ကလပ် စသည်ဖြင့် နေရာအတော်များများမှာ Day Club တွေရှိနေပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ပြည်ပတွင်နေထိုင်ကြသော နိုင်ငံရေးလုပ်စားအချို့ 
မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်နေကြ သည်ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုတွေ့ကြုံနေရသည်။ ထိုနည်းတူစွာမိမိတို့နိုင်ငံမှနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများမှာလဲပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြုံတွေ့ နေကြရမည်မှာလဲ မလွဲဧကန်ပင်။မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်၊တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်စသည် ဖြင့်ကုန်းဘောင် မင်း ဆက်များ ပဒေသရာဇ်စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်သီပေါမင်းလက်ထပ်တွင်သူ့ကျွန်ဘ၀သို့
ကျရောက် ခဲ့ရသည်။ဘာကြောင့် သူ့ကျွန်ဘ၀ကျရောက်ခဲ့ရသလဲ အဖြေကို ရှာကြည့်ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိဆိုခြင်းကရာခိုင်းနှုန်းအရကြည့် မည် ဆိုလျှင်၈၀ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိမည်ဟုလေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရသိရှိရပါသည်။
ပဒေသရာဇ်ခေတ်လွန်စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံကို စည်းရုံးပြီးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုေ ဖ်ာဆောင်ခဲ့ သူမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို မည်သူမျှငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ် ရေး ဖခင်ကြီးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသောဗိုလ်ချုပ်သည်မြန်မာနိုင်ငံအား လွတ်လပ်ရေး ရယူပေးနိုင်ရုံ သာမက ဒီမိုကရေစီ စနစ်တစ်ခုကိုလဲ အုပ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။ သို့ ပေမယ့်လဲတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ၊ အတ္တကြီးသူလူတစ်စု၏ အကောက်ကြံမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အားကိုးရမည့် ရတနာ တစ်ပါး ဆုံးရှုံးခဲ့ ရလေသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အုပ်မြစ်ချပေးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး ၁၄နှစ်အကြာ မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ပါတီစနစ်သို့ကျရောက်ခဲ့ရပြီးနောက် စနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့် မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုး
၂၀၁၁ခုနှစ် မတ်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ပေါ် ထွက်လာပြီး မကြာမီ မရှေးမနှောင်းဆိုသလိုပင် ပြသနာများကိုဖြေရှင်းနေ ရသည်မှာလဲ အားလုံး အသိ ပင်ဖြစ် သည်။ ထိုသို့ ဖြေရှင်းရာတွင်ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့် ပတ် သတ်ပြီး အစိုးရ၏ ရပ်တည်မှုသည်သမိုင်းကောင်းဖြစ်သည်။ရပ်တည်မှုပြတ်သားသည်။ရပ်တည် မှုပြတ်သားသော်လည်း အရေးကိစ္စဖြေရှင်း မှုမှာ အမြှော်အမြင်ရှိရှိ သိမ်မွေ့ ညင်သာစွာဖြေရှင်းနေ သည်ကို လဲတွေ့ ရပါသည်။ထိုသို့ ဖြေရှင်းနေသည်ကိုအသားထဲမှ လောက်ထွက်ကြသူများ၊မိမိ အကျိုးစီးပွား အတွက်ရှေ့တန်းတင် ထားမည့်သူများမှာသမိုင်းရိုင်းမည့် သူများဖြစ်သည်။မိမိအကျိုးအတွက်ဆို မည်သည့် ကိစ္စကို မဆို လုပ်ကိုင်ရန် ၀န်လေးတတ်သူများမဟုတ်၊ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက် "ယုံကြည်ချက်" ဆိုသော စကားလုံး ကို တွင်တွင်သုံးပြီး မျက်စိကို စုံမှိတ်အော်ကာ မိမိနိုင်ငံအား ချောက်ထဲ တွန်းချမည့် သူများဖြစ် သည်။
မှန်ကန်သောတောင်းဆိုမှု၊ အများကိုကိုယ်စားပြုသော တောင်းဆိုမှုမရလို့ဆိုပီးတောင်းဆိုတာမျိုးတော့ လက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်၏။အစိုးရမှအရာအားလုံးလိုက်လိုက်လျောလျောရှိနေသည့်ကြားမှယုံကြည်ချက် အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝနားမလည်နိုင်ပါ။တစ်ရေးနိုးလို့ ဆန္ဒမပြည့်ဝတိုင်း တိုက်ပွဲဝင်ရပါသည်ဟုဆိုလျှင်သင်၏မိသားစုအပေါ်တွင်ကောဘယ်လောက်စီမံခန့် ခွဲနိုင်လဲဆို တာကို သတိရှုစေ ချင်ပါသည်။တောင်းဆိုနေမှုများကိုလိုက်လျောနေလျက်သားနှင့်ပင် ယုံကြည်ချက် အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေ ရသည် ဆိုပါလျှင်ထိုသူတို့ အား အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ပညာရေး၊ဒီမိုကရေစီ အရေး စသော ကဏ္ဍပေါင်းစုံ အသီးသီးတွင် အခြေခံကောင်းသော အုပ်မြစ်တို့ ရှိနေစေရန်သမ္မတကြီးလဲဆောင်ရွက်နေပါသည်။သမ္မတကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက် များကိုလူတစ်စုမှသာထောက်ခံနေကြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူအများ စုသာ မကနိုင်ငံတကာ ကပါ ထောက် ခံနေသည်ကိုလဲတွေ့ နေရပါသည်။ယခုကဲ့သို့တိုးတက်နေသောခေတ်ကြီး ထဲတွင်ယခင်က လိုမှိုင်း တိုက် ၀ါဒဖြန့်ခြင်းမျိုးလုပ်ဆောင်ရ်ျမရနိုင်တော့ပါ။ထို့ကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူအချို့ ခွက်ပျောက် သွားကြသည် ကိုလဲအားလုံးအသိပင်။
ထို့ ကြောင့် အဆိုးသံသရာဝဲဂယက်ထဲမှ အကောင်းသံသရာသို့ ဝင်ရောက်လာသောမိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုး စီးပွားကို မျက်ကန်းသဘောတရားအယူအဆများဖြင့်မဖျက်ဆီးသင့်၊မတုန့် နှေးစေသင့်ပါ။ပြည်သူ အများ လက်ခံနေကြသော အရာများကို အမြဲဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်မည့်အစားမှန်ကန်သောအယူဝါဒ၊မိမိနိုင်ငံ အား တိုးတက်လိုစိတ်၊မျိုးချစ်စိတ်၊နိုင်ငံချစ်စိတ်များရှိခဲ့ပါလျှင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကသာလျှင် မိမိ နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မည်။
ဖိလစ်ပိုင်ရေကြီးမှုကြောင့် ကျောင်း၊ အစိုးရရုံးများနှင့် စတော့ဈေးကွက်များပိတ်လိုက်ရ
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးနေသည့်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော် မနီလာရှိ ကျောင်းများ၊ အစိုး ရရုံးများနှင့် စတော့ဈေးကွက်များအား ပိတ်လိုက်ရသည်ဟု သြဂုတ် ၁၈ရက်က အေအက်ဖ်ပီ သတင်း ဌာနမှဖော်ပြထားသည်။
လူဦးရေပေါင်း ၁၂ သန်းခန့် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် မနီလာမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသများတွင် Trami အပူ ပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့ညမှ တနင်္လာနေ့ မနက်အထိ မိုးများရွာသွန်းခဲ့ပြီး၊ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် လူဇုံကျွန်းပေါ်ရှိ အဓိကနေရာများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း ခြင်းကြောင့် မနီလာမြို့အပြင်ရှိခရိုင်များမှ ကျောင်းများအား ပိတ်ထားရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် မနီလာမြို့ရှိ အစိုးရရုံးများအား ပိတ်ထားလိုက်ပြီဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်စတော့ဈေးရှယ်ယာဈေးကွက်များလည်း ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု သိရသည်။
မနီလာမြို့၏ တချို့နေရာများတွင် လေးပေခန့်မြုပ်သည်အထိရေများ မြင့်တက်နေသည့်အတွက် လမ်း များအား အသုံးမပြုနိုင်တော့ပေ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ဆောင်ရေး လုပ်သားတချို့မှာလည်း ရွှံ့ညွှန်များ၊ အမှိုက်များနှင့် ရောနှောနေသည့် ရေများအကြားတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲသည့်အတွက် အလုပ်မလုပ်တော့ပေ။
တောင်ထူထပ်သည့် လူဇုံကျွန်း မြောက်ပိုင်းရှိ နေအိမ်များမှ လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့်အားလည်း မြေပြိုမှုများမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှ ကယ်တင်လိုက်သည်ဟု အစိုးရကပ်ဘေး ကယ်ဆယ် ရေးမှဆိုသည်။
Mark Zuckerberg ၏ Facebook အား IT ပညာရှင် တစ်ဦးက Hack လုပ်ခဲ့ခြင်း
စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဟက်ကာတစ်ဦးက ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက် ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ ဟက်ကာအား ယင်းကုမ္ပဏီမှပင် အလုပ်ပြန်လည် ခန့်အပ်ကာ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ခိုင်းဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ကြားဖူးကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ အဖြစ်အပျက်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဟက်ကာကတော့ အလုပ်ရမယ့်လမ်း ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီ ဟက်ကာကတော့ ပါလက်စတိုင်းမှ အိုင်တီပညာရှင်ဖြစ်သူ Khalil Shreateh ပဲဖြစ်ပြီး ယင်း ဟက်ခ် လုပ်ခဲ့တာကတော့ Facebook တည်ထွင်သူနဲ့ အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ Khalil အနေနဲ့ အကျိုးယုတ်စေလို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook နဲ့ Mark Zuckerberg တို့ကို အရှက်ရစေလိုတဲ့ ဆန္ဒလည်း မရှိပါဘူး။ ယင်းအနေနဲ့ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သုံးစွဲသူများရဲ့ Facebook Wall မှာ မည်ကဲ့သို့သော လုံခြုံရေးနှင့် privacy သတ်မှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းထားပါစေ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက် နိုင်စေသည့် bug တစ်ခု ရှိနေကြောင်းကို သက်သေပြလို၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Khalil အနေနဲ့ ဤ bug အား Facebook ၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အား အကြိမ်ကြိမ် အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း မည်သို့မှ ပြုပြင်ပေးခြင်း မရှိပဲ ယင်း၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ မှားယွင်းနေသည်ဟု အကြောင်းပြန်ခဲ့သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမှုဆောင်ချုပ် ဖြစ်သူ၏ Facebook အား တိုက်ရိုက် ဖောက်ထွင်းကာ သက်သေပြခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
Facebook လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလတစ်ဦးက Khalil အား “ကျွန်တော့အနေနဲ့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ပြဿနာကို ရှာမတွေ့ပါဘူး။ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်တော့လည်း error ပဲ ပြနေပါတယ်။ ဆော်ရီးပါပဲ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ Bug ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။” ဟု အကြောင်းပြန်လာခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Mark Zuckerberg ၏ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအား ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက် ပြီးနောက် Wall ပေါ်၌ “ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှာ ပါဝင်ခဲ့ရပြီး ယခုလို wall ပေါ်မှာ စာရေးခဲ့ရတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေကို အကြိမ်ကြိမ် အကြောင်းကြားပြီး ဘာမှဖြစ်မလာလို့ ရွေးစရာလမ်း မရှိတော့တာကြောင့် ယခုလို လုပ်ခဲ့ရတာပါ။” ဟု ရေးသားသွားခဲ့သည်။
ကင်တားနားကို မိတ္ထီလာမြို့ခံများ တီရှပ် ပြောင်းပြန်ဝတ် ကန့်ကွက်မည်
မိတ္ထီလာ၊ သြဂုတ် ၁၉
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်အိုဟေး ကင်တားနားကို မိတ္ထီလာ မြို့ခံများက သြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် တီရှပ်အင်္ကျီ ပြောင်းပြန် ဝတ်ကာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမည်ဟု အဆိုပါ မြို့ခံများထံမှ သိရှိရသည်။
အင်္ကျီရှေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဓာတ်ပုံကို အမှန်ခြစ်ထား ပြီး ကျောဘက်တွင် ကင်တားနား၏ ပုံပါသည့် အနီရောင် စက်ဝိုင်း ကန့်လန့် မျဉ်းဖြင့် ထည့်သွင်းကာ အလိုမရှိကြောင်း သဘောကို ပြသမည်ဟု ယင်းဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှား စေသည့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်သည်ဟု စွပ်စွဲမှု၊ ကင်တားနား လာမည့် အချိန်တိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများက ပဋိပက္ခ ဖန်တီးနေမှုနှင့် ယခုခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် သို့ ရောက်စဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ သံဃာတော် များဘက်သို့ ခြေဆင်း ထိုင်သော အမူအရာတို့ကို ကန့်ကွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံ တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးမင်းသူရက ဆိုသည်။
ကင်တားနားအား အမြန်ဆုံး ထွက်သွားရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်း မပြုရန်၊ ကင်တားနားကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထူး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ တာဝန်မှ အမြန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းပေးရန်၊ ကြီးမြတ်သော ရာထူးနှင့် တာဝန်ကို အလွဲသုံးစား ပြု၍ ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးကို သိက္ခာမဲ့စေသော ကင်တားနားကို ပြတ်သားစွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကြောင်း ရေးသား ထားသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို မြို့ခံလူထုက ကင်တားနားကို ပေးအပ် မည် ဖြစ်ကြောင်း မိတ္ထီလာ ဒေသခံ ဒေါ်မေသက်ဦးက ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရန် အတွက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို လေ့လာရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၁ ရက်ကြာ ရောက်ရှိနေသည့် ကင်တားနားကို ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် လည်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကင်တားနားသည် ယခုခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်းပြည်နယ် တို့ကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မိတ္ထီလာ မြို့ခံများက ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ကင်တာနားမှာ ည ၁၀ နာရီထိ ရောက်ရှိ လာခြင်း မရှိသဖြင့် လူစု ကွဲသွားကြောင်း အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းဇော်က ပြောကြားသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under မှုခင်း | No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း အင်းလျားကန်ရှေ့ရှိ ဖူဆန်ဘုံကျောင်းရှေ့ တွင် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က လုံခြုံရေးအတွက် မတ်တူးယာဉ်ကို စစ်ဆေးသည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးကို အဆိုပါယာဉ်ပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအရာရှိများ အပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ တာ ဝန် ရှိသူ များက ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် မတ်တူးယာဉ်ကို စစ်ဆေးစဉ် အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းနှင် လာ သူ ဗဟန်းရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက်၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်းတွင်နေသူ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အမျိုး သား က ယာဉ်စစ်ဆေးသူများကို မချေမငံ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ယာဉ်ကို မောင်းနှင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ည ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် ယာဉ်စစ်ဆေးသူများထံ ပြန်လည် ရောက်လာကာ ရန်စပြောဆိုမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယာဉ် ကို ပြန် လည် မောင်းနှင်သွားကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
ထပ်မံ၍ ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိလာပြန်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို မချေမငံ ပြောဆိုရန်စခြင်း၊ တံတွေးဖြင့်ထွေးခြင်း၊ ကားပေါ်မှဆင်းလာကာ ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာ ယာဉ်စစ်ဆေး သူများက ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစဉ် ယူလာသည့် အရိုးအသွား ရှစ်လက်မရှိ ဓားဦးချွန်ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ထိုးခဲ့ ရာ ဒုရဲအုပ် လင်းထွဋ်၏ ညာဘက်လက်ဖဝါး ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံမှ သိရှိရသည်။
ကုလားများ ဗုံးခွဲမည့် သတင်းကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ရှိ စေတီများတွင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရှေးဟောင်း စေတီပုထိုးတော်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်အဦးတွေမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ မနေ့က ညနေပိုင်းကစတင်ပြီး လုံခြုံရေးအင်အားတွေ တိုးမြှင့်ချထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခုလို လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦးက "ကျွန်တော်တို့ ဘုရားနဲ့ သာသနိက အဆောက်အဦးတွေ နောက်ပြီးတော့ ထင်ရှားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ အတွက် လုံခြုံရေးတိုးချလာတာပါ။ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗုံးခွဲတာတွေရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်မှာလည်း မဖြစ်ခင် ကာကွယ်တဲ့ သဘောပါ"
ဒါ့အပြင် မြောက်ဦးမြို့နယ် ကျေးရွာတွေမှာလည်း လုံခြုံရေးအတွက် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသီးသီးကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေက ညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘူသီးတောင်နဲ့ မောင်တောမြို့နယ်တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးနောက် အခုလို မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာလည်း လုံခြုံရေးတွေတိုးချဲ့တဲ့ သတင်းပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under ကျန်းမာရေး |3comments
ငါ့ဘက်က မှားတာ ပါ ...တလောကလုံးမှန်တယ်
ခုတလော လွှတ်တော်မှာရော ၊ အပြင်မှာ ပါ တပ်ကသိမ်းထားတဲ့ မြေ ဆိုသော အကြောင်းရာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး မြေယာပိုင်ဆိုင်သူ ပြည်သူတွေ နဲ့ တပ်မတော်သားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြားနေရပါတယ် ။ အဲဒီ အကြောင်းရာ အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားနေမိတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပြည်သူ တွေ ကနေ မွေးဖွား လာသော ၊ ပြည်သူထဲက ပြည်သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်သူတွေ ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်သလို ၊ လယ်ယာမြေ ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်လို့ ကိုယ်တွေ့ တွေလည်း ကြုံတွေ့ ခံစားရဖူးပါတယ် ။ ဒီမြေ ဒီယာတွေ ဟာ ၊ ဘိုးဘွားလက်ထက် ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ် ၊ ဘိုးဘွား တွေ သေဆုံးတဲ့ခါ အဖေ အမေတွေကို အမွေပေးခဲ့တယ် ။ဒီလယ်မြေ ယာမြေတွေကိုတစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ကောင်းမွန်အောင် မြေပြုပြင်တာတွေ ၊ ရေ ကြာကြာနေအောင်ကသန်း တင်ရတာတွေ မျိုးတွေမှာ မိသားစုလိုက် ၆ နှစ်သား ၊ ၇ နှစ်သား ကလေးတွေ ပါမကျန် တစ်မိသားစုလုံး လုပ်ကိုင်ကြရတာမျိုးပါ ။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်းလေးတွေကို ရောင်းချသုံးစွဲရတာ မျိုးရှိသလို ၊ ပေါင်နှံ သုံးစွဲရတာမျိုးလည်းရှိတယ် ။ ရောင်းမယ် ပေါင်မယ် ပဲ ထားပါတော့ ... မောင်ဖြူ ဆီမှာရောင်းရင် ၁ သိန်းပဲရမယ် ၊ မောင်မဲ ဆီမှာရောင်းရင်တော့ ၅ သိန်းလောက်ရမယ် ဆိုရင် ... ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မောင်မဲ ဆီရောင်းချင်တာ သဘာဝကျမယ်ထင်ပါတယ် ။ တခါတခါ စီးပွားရေး အဆင်ပြေတဲ့ချိန် တခြားတပါးသူဆီကနေ ဝယ်ယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိုက်ပျိုးမြေတိုးချဲ့ ရတာတွေလည်းရှိတယ် ။ ရွာနားတစ်ဝိုက် ၊ မြို့နားတစ်ဝိုက် ပိုင်ဆိုင်သူတွေသာ ပြောင်းသွားကြတယ် ။ ဒီမြေကတော့ ဒီမြေပဲ ။ အဲဒီ လယ်ယာမြေ နဲ့ ပဲ စားသောက်ဖို့ ၊ သားသမီးတွေ ကျောင်းထားဖို့ ၊ ကျန်းမာရေးစားရိတ်သုံးစွဲ ဖို့ ၊ အလှုအတန်းပြု ကြဖို့ ၊ ကုသိုလ်ရေးလုပ်ကြဖို့ ရှာဖွေ ကြရတယ် ။ ဒီလယ်မြေတွေ ၊ ယာမြေတွေ မှ မရှိရင် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ ။ လမ်းတွေဖောက်တယ် ၊ စက်ရုံတွေ ဆောက်တယ် ၊ အစိုးရစီမံကိန်းတွေ အကောင်ထည်ဖော်တယ် ၊ တပ်တွေတည်တယ် ... ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်မြေ ၊ ယာမြေတွေမှာ စီမံကိန်းမြေ ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်လေး လာထောင်လိုက်တာနဲ့ လုပ်ကိုင်လို့ မရတော့ဘူး ။ တခါတလေ သီးနှံ လေး တွေ စိုက်ထားတယ် .. ကိုယ်က ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုသေးလို့ တခြား လယ်မြေ ၊ ယာမြေတွေမှာ သွားလုပ်ကိုင်နေတယ် ... ကိုယ်သီးနှံလေးတွေ ကိုယ်လည်းသွားကြည့်ရော အလယ်တည်တည် ကနေ ဘူဒိုဇာ နဲ့ ထိုးသွားတယ် ။ တားချိန် ဆီးချိန်လည်းမရလိုက်ဘူး ။ ယူတာကတော့လမ်းတစ်နေရာစာ ပဲ ဒါပေမဲ့ ... လမ်းဟိုဘက်လည်း ထွန်တတုံးးစာ ၊ လမ်းဒီဘက်လည်း ထွန်တတုံးစာ ပဲ ကျန်တော့ တဲ့ခါ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ တာ မျိုး ကိုယ်တွေ့ ကြုံရဖူးတယ် ။
ပြည်သူအတော်များများမြင်ကြတာ က သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော မြေ ၊ ယာတွေ ကို တပ်မတော် က ဝင်ရောက်နေထိုင် နေတာ ၊ ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ... တပ်မတော်က မြေသိမ်းတယ် (သို့) တပ်သိမ်းမြေလို့ မြင်ကြတာပါ ။ သို့ ပေမဲ့ တပ်မတော် က မြေသိမ်းခွင့် မရှိသလို ၊ မြေသိမ်းလို့လည်းမရပါဘူး ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကသာ နိုင်ငံအကျိုး အတွက် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ နဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းခွင့်ရှိပါတယ် ။ နေရာတစ်နေရာ မှာ တပ်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် နှင့် အတူ မြေအတိုင်းတာ ပမာဏ ကို သက်ဆိုင်ရာမြေတိုင်းဌာနက တဆင့် တိုင်းတာပေးရတာပါ ။ ပြီးတဲ့ ခါ အဲဒီနေရာကိုတပ်နယ် ၊ တပ်ဧရိယာ အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် ။ အဲဒီ အခါ ကျမှ သာ တပ်မတော် က ခြံစည်းရိုးခတ်တာ ၊ တပ်တည်ဆောက်တာ လုပ်ရပါတယ် ။ တပ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုရာမှာ တခုပြောလိုတာ က ... တပ်ရဲ့ အလည်ဗဟို (သို့) စစ်ရေးအချက်ချာ နေရာမှာ တပ်ရဲ့ အဓိက ဗဟိုကင်း တပ်ဆောက်ပါတယ် ၊ လက်နက် ၊ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း ၊ ခဲယမ်း စသဖြင့် ထားပြီး နေ့ညမပြတ်စောင့်ကြပ်ကြရတဲ့နေရာပါ ။ အဲဒီနေရာ ဟာ တပ်ရဲ့ ခြံစည်ရိုး တွေနဲ့ အနည်းဆုံး လက်နက် တစ်ကမ်းအကွာ မှာရှိမှ ရပါတယ် ။ လက်နက် တစ်ကမ်းမှီပြီဆိုရင် အပြင်ကနေ လာပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင် ဗဟိုကင်း ကျဆုံးပါလိမ့်မယ် ။ ဗဟိုကင်းကျဆုံး ရင် တပ်ကျဆုံးတာပါပဲ ။ အဲဒီတော့ ဗဟိုကင်းကို မူတည်ပြီး ပတ်လည် မြေနေရာတွေ ယူထားတယ်ဆိုပါတော့ ... တချို့ နေရာတွေကို စစ်သည်တွေနေဖို့ ဘားတိုက်တွေ ၊ ရိပ်သာတွေ ၊ ရုံးအဆောက်ဦးတွေ လိုင်းခန်းတွေ တည်ဆောက်လိုက်တယ် ။ ပိုနေ ၊ လွတ်နေတဲ့ နေရာတွေရှိတယ် ။ အဲဒီနေရာတွေကို တပ် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် သီးနှံတွေ စိုက်ကြတယ် ။ မူလ မြေပိုင်ဆိုင်သူ ပြည်သူတွေ အမြင်မှာကျတော့ ... တပ်မတော် က သူတို့ မြေသိမ်းပြီး ...သူတို့ယူစိုက်တယ်လို့မြင်ကြတယ် ။ တခု သိရမှာ က ကျွန်တော်တို့ စစ်သားတွေ စစ်တိုက်ချင်လို့ စစ်ထဲဝင်လာတာ စပါးစိုက်ချင်လို့ ဝင်လာတာ မဟုတ်ဘူး ။ ယောကျာင်္း ကစစ်တိုက် ၊ မိန်းမက ကောက်စိုက် ၊ သားကြီးတော့ ကောက်လှိုင်းပုတ် ၊ သမီးကြီးတော့ စပါးပြာ ... လုပ်ချင်လို့ လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး ။ မိသားစုတွေ ရှိတယ် ၊ အနာဂါတ်တွေရှိတယ် ၊ ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်အတွက် ရိက္ခာ မြန်မာငွေ ၅၀၀ ကျပ်ကျော်နဲ့ မိသားစုဘယ်လို ထမင်းစားမလဲ ။ နိုင်ငံအနေနဲ့ ကြည့်ပြန်တော့လည်း နိုင်ငံသားဝင်ငွေ တစ်လ ၄၁ ဒေါ်လာ ပျမ်းမျှ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီထက်ပိုပြီး ထင်စားစရာ ဘာတွေရှိမှာလဲ ။ အဲဒီတော့ တပ်ရဲ့ ဦးဆောင်သူ တွေဟာ စပါးမစိုက်ချင်လည်းစိုက် ၊ နွားမမွေးချင်လည်းမွေး ၊ ဝက်မကျွေးချင်လည်းကျွေး ဆိုတာတွေ စစ်သည်တွေ မလုပ် လုပ်ချင်အောင် ... ချော့လိုက် ၊ ချော့လိုက် နဲ့ ခိုင်းကြရတယ် ။ တခါတလေ တပ်တွေရှိတယ် ...တပ် ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်ဘူး ... ကောင်းတဲ့ လူတစ်ရာလောက်က တစ်နှစ်မှာ ၈ လစစ်ဆင်ရေးထွက် ၊ တပ်မှာကျန်ခဲ့တာ က ခြေပြတ် ၊ လက်ပြတ် ၊ အကန်း ... အဲဒီတော့ တပ်မှာကင်းစောင့်နိုင် ၊ နွားကျောင်းနိုင်တာ လောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ် ။ အဲဒီတော့ တပ်ရဲ့ လယ်မြေတွေကို အပြင် က လူတွေကို သီးစားပြန်ချတယ် ။ အဲဒီ ခါ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မြင်ကြတာ က တပ် က လယ်တွေသိမ်းပြီး ကိုယ့်လယ်ကို အငှား နဲ့ သီးစားပြန်လုပ်ရတယ်လို့ မြင်တယ် ။ တကယ်တမ်း က ဒီလယ်ယာမြေတွေကိုတပ် မြေအနေနဲ့ အစိုးရ က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးထားတဲ့ အတွက် သာ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ ချိန်မှာ တာဝန်ရှိသလို စီမံခန့်ခွဲတာပါ ။ ဒီတပ်မှာ ကျွန်တော် ၃ နှစ်တာဝန်ကျတယ်ဆိုရင် .. ဒီမြေတွေ ကိုကျွန်တော် ၃ နှစ် လုပ်ကိုင်ပေးရတယ် ။ နောက် တခြားတပ်ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားရင်ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်တော့ဘူး ။ တပ်မတော်သား တွေ ဟာမြေသိမ်းလို့ မရပါဘူး ။
အစိုးရတရပ်ဟာ ပြည်သူတွေ ကိုယ်စားပြုဖို့ ၊ အများကိုယ်စား ..ပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကြဉ်းဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူတွေ ပါ ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလမှာ အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးဆုံး သမ္မတ ဟာနိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အရေးအရာတွေ စီမံရာမှာလည်း ဥပဒေပြုအဖွဲ့ က စီရင်ပြုစုထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဥပဒေ များအရသာ စီမံခန့်ခွဲရတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၅၃ ခုနှစ် သမ္မတဦးဘဦး လက်ထပ်တည်း က လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေ အရ ...နိုင်ငံတော် မှာရှိတဲ့ လယ် ၊ ယာ မြေများကို နိုင်ငံတော်က သာပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၁ ရဲ့ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) မှာလည်း လယ်ယာမြေအားလုံးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာနိုင်ငံတော် ဖြစ်ပြီး ...ပြည်သူများ တောင်သူများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်အသုံးချခွင့် ပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ နောက် အခန်း (၁၀) ရဲ့ ပုဒ်မ ၂၉ မှာလည်း ( နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန်သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဝန်ကြီးဌာနသည် ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ) ဟု ဆိုထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ... နိုင်ငံတော် နဲ့ ပက်သက်သော စီမံကိန်းတွေ ၊ စက်ရုံတွေ ၊ လမ်းတွေ ၊ တံတားတွေ ၊ ဆည်မြောင်းတွေ ၊ တပ်တွေ တည်ဆောက်ရမှာ ယခင်လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ပေါင်နှံရောင်းချခွင့် ပေးထားသော ပြည်သူများထံမှ ပြန်လည်သိမ်းယူခွင့်ရှိ နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့ ပြန်လည်သိမ်းယူရာမှာတော့ လယ်ယာမြေဥပဒေ အခန်း ၉ ပုဒ်မ (၂၆) မှာ
( တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူအကျိုးငှာ ဖြစ်စေ သိမ်းယူသည့်လယ်ယာမြေနှင့် ယင်းလယ်ယာမြေပေါ်၌ အဆောက်အအုံဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင် မူလလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ ဆောင်ရွက်ထားသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် နစ်နာမှု လုံးဝမရှိစေရန် လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာက ပြုလုပ်ပေး နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ) ဆိုပြီး သိမ်းယူခံရသော ပြည်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရန် အကာကွယ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း ဥပဒေ တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလျှင် အစိုးရတစ်ရပ် အနေနဲ့ Rule of the law ကို လိုက်နာတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
လယ်ယာမြေဥပဒေ ၂၀၁၂ ပြဌာန်းခါ စ ...ထွက်လာတဲ့ အသံတွေကို မှတ်မိနေပါတယ် ။ လယ်လုပ်သူ လယ်မပိုင်ရလို့ justice မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုကြသူတွေလည်းရှိပါတယ် ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ကို ကိုယ်စားပြု ကြတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပြည်သူအားလုံးကိုကိုယ်စားပြု ကြတာဖြစ်လို့ စဉ်းစားကြတဲ့ ခါ ပြည်သူအားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဟာ လယ်သမား သားသမီးတစ်ယောက်မို့ ကိုယ့်လုပ်တဲ့လည် ၊ ကိုယ့်မိဘဘိုးဘွားပေးထားခဲ့ တဲ့လယ်ကို ကိုယ့်ဘာကို ဘာပဲ စိုက်စိုက်၊ ဘယ်သူ့ကိုပဲရောင်းရောင်း ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် စီရင်ချင်တာ ဟာ ကျွန်တော့် အတွက်သဘာဝကျပါတယ် ။ သို့သော် လူအများကိုကိုယ်စားပြု သူတွေ အနေနဲ့ ကျတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်ဟာ တခြားတပါးသူတွေကို ဂယက်မရိုက်ဖို့လည်းထည့်စဉ်းစားကြရဦးမယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ မြေပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပါတော့ တခြား နိုင်ငံကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သောမြေ ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ..အဲဒီမြေဟာ မြန်မာ့မြေပုံထဲက ပါ ပဲ့ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ခွင့် ၊ ပေါင်နှံခွင့် ၊ ရောင်းချခွင့်ကို သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနဲ့အညီ ခွင့်ပြုထားမယ် ..သို့ပေမဲ့ မြေယာအားလုံးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာ နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးတစ်ပြေးညီပြဌာန်းပေးရတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီ အကြောင်းရာတွေဟာ ကျွန်တော့် ဦးနှောက်နဲ့ ဥာဏ်မှီသလောက် ၊ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် ၊ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ တွေ ပါ ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးသပ်ထားတာပါ ။ ကျွန်တော်မမြင် နိုင်တဲ့ အကြောင်းရာများလည်း ရှိကောင်းရှိနေ နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒီအကြောင်းရာတွေမှာ ၊ ခုဖြစ်ပျက် နေတဲ့ ပြဿနာတွေ မှာ ဘယ်သူတွေ မှားသလဲ လို့ မေးလာရင် ... ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ဘယ်သူမှ မမှားပါဘူးလို့ပဲ ရိုးရိုးသားသားဖြေရပါလိမ့်မယ် ။ ခု ဒီကိစ္စ တွေ ဖြစ်နေသလို ၊ နောက်ထပ် လည်း ထပ်ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေ လိမ့်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ။ အားလုံး မမှားဘူးဆိုပေမဲ့ ပြဿနာ ကတော့ ဖြစ်နေပါတယ် ။ အဲဒီ အချက်တွေထဲ က နေ ၊ ဒီ အကြောင်းရာတွေ ထဲ ကနေ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာ နိုင်မှသာအဆင်ပြေမှာပါ ။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူတွေ က လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူလိုတွေး ၊ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူတွေ အတွက်ပဲမြင် ၊ တပ်မတော်သားတွေကလည်း တပ်မတော်သားတွေလို တွေး ၊ တပ်မတော်သားတွေ အတွက်ပဲ ကွက်မြင် ၊ အစိုးရကလည်း အစိုး၇လိုတွေး အစိုးရလိုမြင် ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှည်များကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လိုတွေး ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လိုပဲ မြင် ......အချင်းချင်း တွေ အပြစ်တင်နေလို့ မပြီးပါဘူး ၊ ဒါဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နစ်နာစေမဲ့ စကားတွေ နဲ့ တိုက်ခိုက်လိုက်လို့ လည်းပြီးမသွားဘူး ။ အဖြေရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ အတွေး စတွေ ကနေ တဆင့် စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင်တွေးပြီး ... ပြဿနာရဲ့ အဖြေ ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ် ။
နိုင်ငံခြားသား ရီးသွားများ ပစ္စည်းလုယူ ခံရမှုများအနက် ထက်ဝက်ကျော် တရားခံမမိ
ဖောင်တော်ဦး ရုပ်ရှင်တော် မြတ်စွာဘုရားသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသား အချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ၀င်းမြင့်ကျော်)
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားများ လာရောက် လည်ပတ်ရာတွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများထံမှ ယခုနှစ် အတွင်း၌ ပစ္စည်း အလုခံရသည့် ဖြစ်စဉ်ခုနစ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ သုံးမှုသာ ဖော်ထုတ်နိုင်သေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၊ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား စောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ် သူရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားနှင့် ဆက်စပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မှုခင်းအချို့အနက်မှ ကျူးလွန်သူများကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိရန် ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အဆိုပါ ဒေသ၌ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၂၀ ကျော်ကို တိုးမြှင့်ထားကြောင်း ရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းဦးထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား စောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနှင့် လက်ရှိအချိန်တွင် ခရီးသွားအများဆုံး လာရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ ပုဂံနှင့် ညောင်ရွှေ ဒေသများတို့တွင်သာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အားများကို အဓိကချထားပြီး လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာ လာရောက်လေ့လာနေတဲ့ ပြင်သစ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ် လုယူသွားတဲ့ ကျူးလွန်သူကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူကို မမိသေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလည်း အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်'' ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား စောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ အများဆုံး လာရောက်လေ့လာ လည်ပတ်နေသည့် ပုဂံဒေသနှင့် ညောင်ရွှေ ဒေသတို့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ အတွင်းမှ စတင်၍ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား စောင့်ရှောက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးခန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တပ်ဖွဲ့မှူးက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမြင်ရိုင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး ရိုက်ဖို့ငှားရမ်းရင် ငြင်းပယ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆန်းသစ်လ
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under အနုပညာ | No comments
အရင်က ဗီဒီယိုဆင်ဆာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လာငှားတဲ့ ဇာတ်တိုင်းကို မစီစစ်ဘဲ ခက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့ ဆန်းသစ်လက အခုလို ပွင့်လင်း လွတ်လပ်လာတဲ့ ခေတ်မှာတော့ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွန်းတွေကို သေချာ စီစစ်လေ့လာပြီးမှ လက်ခံရိုက်ကူးဖို့ စဉ်းစားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် လာပြောတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို သေချာကြည့်ရတယ်။ ဇာတ်ကို ကြိုက်ပြီ ဆိုမှ လက်ခံ ဖြစ်တယ်။ ညီမတစ်ယောက်တည်း မဆုံးဖြတ်ဘူး။ မိဘနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကိုယ်သေချာလုပ်နိုင်မယ့် ဇာတ်ရုပ်မျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်တယ်။ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အမြင်ရိုင်းမယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး ရိုက်ကူးဖို့ ငှားရမ်းလာရင် ငြင်းပယ်မှာပါ။ တကယ်လို့ ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်မှ ရိုက်ရမယ်မှန်း သိပြီး ငြင်းမရတဲ့ အခါမျိုး ကြုံလာရင် ညှိုနှိုင်းပြီး ကိုယ်တက်နိုင်သလောက် သရုပ်ဆောင်မှာပါ။ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်ရုပ် ဘယ်လောက်ပဲ ရွေးရွေး လူဆိုတာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်တယ်လေ” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆန်းသစ်လက ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ရိုက်ကူးတဲ့ “Good Luck” ဇာတ်ကားမှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Lucky Girl နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မိတ္ထီလာမှ မြို့သူမြို့သားများ Mr ကင်တားနား အား ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်
မိတ္ထီလာမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) အား လူစုလူဝေးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျှက် ရှိကြောင်း သတင်းရှိရပါသည်။
မြို့ခံ တစ်ဦးမှ ဆက်သွယ် ပြောကြားလာသည်မှာ - ယခု ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှုမှာ မည်သည့် အဖွဲ့ အစည်း မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဦးဆောင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ မိတ္ထီလာ မြို့သူ မြို့သားများ ၏ ဆန္ဒအလျှောက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ မစ္စတာ ကင်တားနား ၏ သံဃာတော်များ အပေါ်တွင် ' အ' ဂါရ၀ ဖြစ်စေသော အပြုအမူများ ပြုမူခြင်းနှင့် ၄င်း တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာ ပါ အချက်အလက်များမှာ အမှန်တကယ် နှင့် ကွဲလွဲ မှားယွင်း နေခြင်း များ အား မကြေနပ်ကြခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 20, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အာဏာမပြရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွား မြှင့်တင်ရေး အခမ်းအနားတွင် ပြောသွားသည်။
"ကျေးရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ တော်ဖို့ကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာတွေမှာ တရာဥပဒေစိုးမိုးအောင်၊ လောင်းကစား ဝိုင်းတွေ၊ အရက်ပုန်းချက်လုပ်တာတွေ၊ ချဲထီဒိုင်တွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ မရှိအောင် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ရ ပါမယ်။ သို့မှာသာ ရာဇဝတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ လုယက်မှု၊ ခိုးမှုတွေကင်းစင်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ ကျေး ရွာတွေဖြစ် လာပြီး စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးတွေ တိုးတက်အောင်လုပ် ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိဘဲ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ တိုးတက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါဘူး။ ရာထူးဆိုတာ အာဏာပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။" ဟု သမ္မတက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် နေပြည်တော် ကောင်စီ ရှစ်မြို့နယ်အတွက် ချေးငွေ ကျပ် ၇၂၀၆.၇ သိန်း ထုတ်ချေးသွား မည်ဖြစ်ပြီး လက်တွန်းထွန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ထရပ်ကား၊ အင်ဂျင်၊ မီးစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်၊ ပရိုဘောက်တက္ကစီကား၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုက္ကားနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စတဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိုး အပါ အဝင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၂၅၈၂.၄၅ သိန်း ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဟု သမ္မက ပြောသည်။
သမ္မတ အလုပ်လုပ်ကြရန် တိုက်တွန်းရာတွင် "အလုပ်မလုပ်ဘဲ ရေသာခို အချောင်လိုက်စားနေကြရင်တော့ တစ်နေ့ မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ပဲ ပြန်ပြီး သံသရာလည်နေကြရအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်ကြပါ၊ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ရှက်စရာ၊ကြောက်စရာမရှိပါဘူး၊ ဂုဏ်ရှိပါတယ်" ဟု ဆိုသွားသည်။
တရုတ်မှာ သေသူ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်း ယူသုံးခွင့် မူပြောင်းလဲ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ ထောင်သားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကိုယူပြီး နာမကျန်းဖြစ် သူတွေကို လွဲပြောင်းအစားထိုး ကုသပေးနေတဲ့ စနစ်ကို နိုဝင်ဘာလကစပြီးတဖြေးဖြေး ပပျောက်သွား အောင် လုပ်ဆောင်မယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ထောင်သားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကို ယူပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ လူနာတွေကို အဲဒီ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းပေးပြီး အစားထိုးကုသပေးတာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို တရုတ်အစိုးရက နှစ်နဲ့ချီကြာအောင် ငြင်းဆန်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မကြာခင် နှစ်ပိုင်းတွေကစပြီး ဝန်ခံမှုတွေ ပြုလုပ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ရိုးရာစဉ်လာအရ သေဆုံးသူတွေဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနဲ့ တခါတည်း မြေမြုပ်သဂြိုလ်တာတွေ၊ မီးသဂြိုလ်တာတွေ လုပ်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် အစိုးရကနေ သေဒဏ်ချ မှတ်ခံရသူ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကို တခြားလူတွေ ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်အောင် ပေးလိုက်တဲ့ အစီအစဉ်အပေါ် ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုအခါမှာ သေဒဏ်ကျအကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း ပေးလျူမှုကို နိုဝင်ဘာလက စပြီး တဖြေး ဖြေး လျော့ချမှာဖြစ်ပြီး မိမိသဘောအရ ပေးလျူဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ကိုသာ ပေးလျူးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစိုးရက အလိုရှိသော ထိပ်တန်း အကြမ်းဖက် သမား တစ်ဦးအား နယူးဒေလီ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အကြမ်းဖက် သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းနိုင်ငံ အစိုးရက အလို ရှိနေသည့် အကြမ်းဖက် သမား ၂၀ ဦးတွင် တစ်ဦး အပါအ၀င် ဖြစ်သော ဆေရက်အဗ္ဗဒူလ် ကာရင်မ်ကို နီပေါနိုင်ငံ နယ်စပ် အနီးမှ သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် အိန်္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
ဆေရက်အဗ္ဗဒူလ် ကာရင်မ်သည် အသက် ၇၀ နှစ်ရှိပြီး အကြမ်းဖက် လုပ်ငန်းများတွင် Tunda အမည်ဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် အတွင်းက အိန်္ဒိယ ပါလီမန် လွှတ်တော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ခိုက်မှု အပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ အတွင်းရှိ တရားခံ များကို အိန်္ဒိယ နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် လွှဲအပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည့် အကြမ်းဖက် သမား ၂၀ ဦး အနက်တွင် တစ်ဦး အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ Tunda သည် အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏ ဗုံးပြုလုပ်မှု ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကြားတွင် အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ အတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှု များတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နယူးဒေလီ မြို့တစ်ဝိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုပေါင်း အနည်းဆုံး ၄၀ နှင့် ရာဇ၀တ်မှုပေါင်း ၃၃ ခုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၎င်းအား အိန်္ဒိယ အာဏာပိုင် များက သြဂုတ် ၁၇ ရက်နှောင်းပိုင်းတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေး ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဌနေအိမ် ရွှေထည် ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံးမှု အိမ်အကူကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၁၈ ။ ။ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၏ နေအိမ်တွင် ရွှေထည် ပစ္စည်း ၁ရ မျိုး (ကာလ တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၂ဝ ကျော်)ရှိ ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံး နေသဖြင့် ပုသိမ်မြို့ အမှတ်(၂) ရဲစခန်းတွင် ဩဂုတ် ၁၁ ရက်က အမှု ဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
ရွှေထည် ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံး မှုတွင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မိမိလေးက ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက် ပြီး ဩဂုတ် ၁၁ရက်က အမှုဖွင့်ခဲ့ သဖြင့် နေအိမ်တွင် အကူ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ မဝေဝေသင်း အသက်၂၁နှစ် ဟသာင်္တမြို့နယ်နေ သူအား ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ''ဝန်ကြီးများ အိမ်ရာဝင်း ဂိတ်နဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အိမ်မှာပါ လုံခြုံရေး အပြည့် ချထားတော့ လူစိမ်း အဝင်/ အထွက် မရှိဘူး။ အိမ်ရဲ့ အနေ အထား၊ အခန်းထဲ မှာထားတဲ့ ပစ္စည်း အခြေ အနေ၊ လုံခြုံရေး ထားတဲ့ အနေအထား တွေကြောင့် လောလောဆယ် အိမ်ထဲ ဝင်/ထွက်ခွင့် ရှိတဲ့ သူကို သံသယ တရားခံ အဖြစ်နဲ့ အိမ်အကူမ လေးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေ ပါတယ်''ဟု အမှတ်(၂) ရဲစခန်း မှူးက ပြောသည်။ ယင်းအမှု အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေး အတွက် ပုသိမ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ပုသိမ်မြို့နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးများ အပါအဝင် (စစစ)၊SP နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီး အကဲများ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်၍ ပုသိမ်မြို့ အမှတ် (၂) ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၂၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ (၃၈၁)ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည်။
''ရွှေထည် ပစ္စည်းပျောက် ဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အိမ်အကူမ လေးကို ညလုံးပေါက်စစ် နေတာတွေ ရှိတယ်။ ပျောက်တဲ့ ပစ္စည်း ကလဲ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဇနီးရဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ သိရတယ်။ အမှုက စစ်ဆေးဆဲပဲ ရှိသေးလို့ တိုင်ကြားတဲ့ အမှု ပေါ်ပေါက်တယ် လို့မကြားမိ သေးဘူး''ဟု အမှတ် (၂)ရဲစခန်းနှင့် အနီး သတင်းရပ် ကွက်မှ သိရသည်။ လက်ရှိ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၏ လွှတ်တော် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးတင်စိုးသည် ယခင် တိုင်း အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ကနဦး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး လူမှုရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန် ပေးအပ် ခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စပိုင်းတွင် လစ်လပ် သွားသော တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဌ တာဝန်ကို တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲ ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ယခု ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ အိမ်ရာ ဝင်းတွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုးညှင်းမြို့ ဖုန်းဆော့ဝဲလ်တစ်ခု ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ...
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ကင်တားနားကို လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ အစီအစ...
အီဂျစ် ထောင်ဖောက်ရန် ကြိုးစားမှုတွင် အစ္စလာမ္မစ် အကျဥ...
မြောက်ဦးတွင် ဦးဥတ္တမရုပ်ထုကို သိန်း ၂၀၀ ခန့် အကုန်အ...
ဖိလစ်ပိုင်ရေကြီးမှုကြောင့် ကျောင်း၊ အစိုးရရုံးများန...
Mark Zuckerberg ၏ Facebook အား IT ပညာရှင် တစ်ဦးက H...
ကင်တားနားကို မိတ္ထီလာမြို့ခံများ တီရှပ် ပြောင်းပြန...
ကုလားများ ဗုံးခွဲမည့် သတင်းကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ရှ...
နိုင်ငံခြားသား ရီးသွားများ ပစ္စည်းလုယူ ခံရမှုများအနက...
အမြင်ရိုင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး ရိုက်ဖို့ငှားရမ်းရ...
မိတ္ထီလာမှ မြို့သူမြို့သားများ Mr ကင်တားနား အား ကန်...
တရုတ်မှာ သေသူ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်း ယူသုံးခွင့် မူေ...
အစိုးရက အလိုရှိသော ထိပ်တန်း အကြမ်းဖက် သမား တစ်ဦးအာ...
တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဌနေအိမ် ရွှေထည် ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံး...